Momba ny JCT - Taizhou Jingchuan Electronics Technology Co., Ltd.
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia ara-kolontsaina manokana amin'ny famokarana, varotra ary fanofana fiara fitaterana LED, fiara fitateram-bahoaka ary fiara fitaterana finday.
Ny orinasa dia naorina tamin'ny 2007. Miaraka amin'ny haavo matihanina sy ny haitao matotra ao amin'ny fiara fanaovana dokambarotra LED, ny làlam-pisoratan'ny LED ary ny vokatra hafa, dia nipoitra haingana teo amin'ny sehatry ny haino aman-jery finday ivelany izy ary mpisava lalana amin'ny fanokafana ny indostrian'ny fiara fitaterana LED any Shina. Amin'ny maha mpitarika ny haino aman-jery LED LED an'i Shina, Taizhou Jingchuan tsy miankina nivelatra ary nankafy ny patanty teknolojia 30 mahery. Izy io dia fanamboarana mahazatra ho an'ny fiara fanaovana dokam-barotra LED, fiara fitateram-bahoaka LED polisy polisy, ary fiara fitaterana afo. Ny vokatra dia misy maodelim-piarakodia mihoatra ny 30 toy ny kamio LED, tranofiara LED, fiara fitaterana finday, tranofiara LED masoandro, kaontenera LED, tranofiara fitarihana fifamoivoizana ary efijery fiara namboarina.
Tamin'ny volana martsa 2008, nomena ny "2007 China Advertising New Media Contribution Award" ny orinasanay; tamin'ny volana aprily 2008, nomena ny mari-pankasitrahana "Teknolojia avo lenta ho an'ny fivoarana ny haino aman-jery ivelany any Sina"; ary tamin'ny taona 2009, nomena ny mari-boninahitra "2009 China Brand and Communication Conference 'Brand Contribution Award' izay nisy fiantraikany tamin'ny Sinoa Enterprise Brand Star".
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd. dia miorina ao Taizhou, faritanin'i Zhejiang, tanàna azo iainana tsara indrindra any Shina. Taizhou dia miorina eo amin'ny morony afovoan'ny Faritanin'i Zhejiang, akaikin'ny ranomasina atsinanana atsinanana, tsara ny tontolo iainana. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny faritra ara-toekarena ao Taizhou ary manana fitaterana rano, tany ary rivotra. Ny orinasanay dia nahazo "Taizhou Key Enterprise of Cultural Export" sy "Taizhou Key Enterprise of Service Industry" avy amin'ny governemanta monisipaly Taizhou.
Ny fotodrafitrasa famokarana mifandraika amin'ny orinasa dia mandroso, feno ary miaraka amin'izay dia manana karazana fitaovana sy fitaovana fitiliana avo lenta. Ny ekipa dia manana ekipa fitantanana mahomby sy ekipa R&D, mifantoka amin'ny fampidirana sy fanofanana ireo mpiasa sy mpiasa matihanina zokiny. Miaraka amin'ny hery fikarohana siantifika matanjaka, ny orinasanay dia nanangana atrikasa manara-penitra, efitrano fitantanana ary ivon-toerana R&D. Amin'izao fotoana izao dia misy ny sampana teknolojia famokarana, sampana fanaraha-maso kalitao, sampana famatsiana, sampana fivarotana, sampana serivisy aorian'ny varotra, departemanta ara-bola ary departemanta hafa, miaraka amin'ny fizarazarana mazava ho an'ny asa sy ny fizarana siantifika.
Ny orinasa dia manaraka ny tsipika politika momba ny kalitaon'ny "Kalitaon'ny kintana dimy, mitady zava-baovao amin'ny zava-misy". Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2007, ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy aorian'ny varotra dia avo lavitra noho ny an'ny orinasa ihany. Ny ekipa dia manana ekipa mpivarotra varotra vahiny matotra ary ekipa serivisy teknika aorinan'ny varotra. Ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 50 toa an'i Eropa, Etazonia, ary Moyen Orient. Nandritra ny taona maro dia nahafa-po ny mpanjifa izany amin'ny serivisy avo lenta sy avo lenta.
Misiona Jingchuan: Avelao ny vazan-tany rehetra hankafy fety hita maso
Jingchuan Standard: Fanavaozana, fahamarinana, fampandrosoana ary fandresena
Finoana Jingchuan: Tsy misy zavatra tsy ho vita eto amin'izao tontolo izao
Tanjon'ny Jingchuan: Manangana marika iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fiara dokambarotra finday
Fomban'ny Jingchuan: mazoto sy haingana, mitazona fampanantenanao
Fitantanana Jingchuan: Tanjona sy tanjona
Mandritra izany fotoana izany dia nanaiky ny fanavaozana ny teknolojia mitohy i Jingchuan mba hamoronana lanja ho an'ny mpanjifa, izay heverina ho loharanon'ny fivelomana ho an'ny orinasa. Jingchuan dia nahazo ny fahatokisana sy ny fiaraha-miasan'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fitomboan'ny fahaizany manavao, ny fahaizan'ny customization miavaka ary ny fahaizany mandefa tonga lafatra hatrany.
Manoloana ny fahafaha-manao sy fanamby vaovao, Jingchuan dia hanohy ny tanjon'ny orinasa "mamorona fanjakana fanjakana amin'ny kodiarana", tapa-kevitra ny ho mpanome serivisy fampitaovana feno haino aman-jery any Sina. Fikarohana lalina sy fivoaran'ny fiaran'ny haino aman-jery LED, tranofiara LED masoandro ary vokatra hafa, mba hanomezana anjara biriky maoderina amin'ny fampandrosoana ny orinasam-pirenena sinoa.
Led Mobile kamio, Kamiaona finday taratra finday, Nentina amidy kamiao finday, Mobile Led Billboard kamiao, Led Mobile Trailer, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday,